Tsy nahomby tamin'ny fampandehanana ny iMessage sy FaceTime | Vaovao IPhone
Fahadisoana amin'ny fampandehanana ao amin'ny iMessage sy Facetime amin'ny iOS7
Misy mpampiasa iOS 7 manana olana miaraka amin'ny activation iMessage sy FaceTime amin'ny iPhone, iPad, ary iPod Touch anao vao nohavaozina. Ny sasany amin'ireo olana dia nipoitra nandritra ny fisokafan'ny fanavaozana tany am-piandohana izay natao tamin'ny fotoana iray ihany, rehefa navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Tsy misy mpampiasa te ho farany hametraka ny iOS farany nohavaozin'i Apple. Saingy taorian'ny fahatongavan'ilay tafiotra dia nilamina ny mpampiasa sasany, mbola manohy manana olana amin'ny fampandehanana ny serivisy iMessage sy FaceTime.
Ny ankamaroan'ireo hafatra lesoka fampandehanana amin'ny tranga roa, ho an'ny iMessage sy ny Facetime, dia «Miandry ny fampahavitrihana»Tsy misy ny iDevice mamaly fiasa hafa na« Nisy lesoka nandritra ny fampahavitrihana. Andramo indray mandeha".
En Vaovao IPad hiezaka hamaha an'ity olana ity izahay ary ireo fitaovana izay manana olana dia mety hiasa 100% amin'ny farany. Ho azy ireo dia mila manaraka ireo dingana voalaza etsy ambany ianao:
1.- Hamafiso fa ny Apple ID dia voalamina tsara ho an'ny iMessage sy ny Facetime.
iMessage. Tsindrio ny Settings, Messages ary iMessage. Tsindrio ny Send and mahazo. Eto isika dia hanamarina raha marina ny Apple ID sy ny nomeraon-telefaoninay (raha azo ampiharina). Tsindrio ny Apple ID hanovana mpampiasa raha tsy marina ny fanovana azy.
FaceTime. Ao amin'ny Settings, FaceTime dia manamarina raha marina ny Apple ID, miaraka amin'ny mailaka sy adiresy mailaka.
2.- Atsaharo ny serivisy roa. Raha vantany vao natao ny fanovana na ny fananganana azy ireo amin'ny tranga misy anao dia tsy maintsy ajanoninay ny serivisy roa.
iMessage. Fikirana, hafatra, tsindrio ny safidy hamonoana. Miandry segondra vitsivitsy izahay ary hampavitrika azy indray amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny kiheba iray ihany.
FaceTime. Fikirana, FaceTime dia tsindrio ny safidy hamonoana. Toy ny amin'ny iMessage, miandry segondra vitsy isika dia hampavitrika azy indray.
3. Avereno ny fametrahana ny tambajotra.
Al avereno ny fikirana tambajotra, tsy maintsy hamerina handamina ireo tambajotra Wi-Fi rehetra izay efa nataonao teo aloha ianao. Midira amin'ny alàlan'ny Settings, General, Reset ary safidio ny Reset Network setting.
Raha mihidy amin'ny alàlan'ny kaody ny fitaovana dia tsy maintsy ampidirinao izy alohan'ny hamerenanao ny fikirana. Aorian'ny famerenana ny fikirana, ampio ny Wifi izay ampiasainao ara-dalàna ary zahao fa miasa iMessage sy FaceTime. Mandefasa iMessage amin'ny olona iray izay mampiasa rafitra mitovy (azo antoka, rehefa misafidy ny fifandraisana ianao dia ho lasa manga, miaraka amin'ny bokotra Send, raha toa ka maitso ny fifandraisana sy ny bokotra dia tsy hanana iMessage ianao).
Hahafantatra raha miasa ny FaceTime manao antso audio alohan'ny horonan-tsary. Ny antso an-tariby dia tsy mampiasa bandwidth mihoatra ny antso video, ary hitanay fa miteraka olana mitovy amin'ilay voalaza amin'ity lahatsoratra ity izy ireo.
4.- Atsangano indray ny iDevice.
Vonoy ny iDevice ary avereno indray. Tsindrio ary tazomy ny bokotra Power Rehefa miseho ilay safidy Slide to Power Off dia vonoy ilay fitaovana. Raha te hampody azy io dia mila mitazona ny bokotra Power mandritra ny segondra vitsy ianao.
Tonga izao ny fotoana hijerena hoe ohatrinona iMessage sy FaceTime dia miasa tanteraka. Mandefasa iMessage na miantso amin'ny alàlan'ny FaceTime. Tokony handeha tsara ny zava-drehetra.
Mbola tsy mandeha io?
Amin'ny toe-javatra manokana dia mety hitranga izany. Mba hamahana azy ny zavatra tsara indrindra dia hamerina amin'ny laoniny ny fitaovana amin'ny fivarotan'ny orinasa. Mba tsy hahafoana vaovao, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mampifandray azy amin'ny iTunes ary ataovy ny backup (vita ho azy isaky ny mampifandray azy ianao). Rehefa efa nataonao ny nomaniny ho solon'izay, hiditra amin'ny Settings, General ary Delete ny atiny sy ny toerana misy anay izahay. Ity hafatra manaraka ity dia hiseho eo amin'ny efijery iDevice: "Hamafa avokoa ny angona sy ny atiny ary hamboarina daholo ny fikirana." Tsindrio ny Delete.
Aorian'ny famerenana ny fikirana rehetra, iOS 7 dia hampahafantatra anao ireo dingana hanaraka hampandeha ny serivisy rehetra, ao anatin'izany ny iMessage sy FaceTime. Raha vantany vao hitanao fa mandeha tsara ny zava-drehetra, na ny iMessage na ny FaceTime, tonga ny fotoana hampifandraisana azy amin'ny iTunes indray ary hamerenana amin'ny laoniny ny iDevice amin'ilay kopia nataonay teo aloha.
Mbola tsy mandeha?
Ny mety izany mamorona kaonty Apple vaovao mety hamaha ny olana izany. Fa raha raisina ny safidy rehetra ampifandraisany, dia tsara kokoa ny mitondra azy io amin'ny serivisy teknika, satria angamba tsy olana amin'ny fanitsiana izany, fa amin'ny fitaovana.
Fanazavana fanampiny - Amboary ny olan'ny Wi-Fi ao amin'ny iOS 7, Manatsara ny fanjifana bateria ao amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Fahadisoana amin'ny fampandehanana ao amin'ny iMessage sy Facetime amin'ny iOS7
Fermonster dia hoy izy:
Valiny amin'ny Fermonster
Eny, saingy miseho hatrany "miandry ny fanamarinana"
giovisdesign dia hoy izy:
Salama ry zalahy, izaho koa nanana olana tamin'ny fampandehanana ny iMessage sy ny Face Time, ka hitako ny vahaolana tao amin'ny forum APPLESFERA, ilay lehilahy antsoina hoe JAVIERDRUMS no manome ny vahaolana,
“Efa nahavita namaha izany aho. Mila mividy karatra mialoha ianao ary manafatra trosa, hanazava ny antony aho: Ireo hafatra an-tsoratra izay ampidirin'i Claro amin'ny drafiny any Peroa dia tsy misy hafatra any ivelany, fa hafatra nasionaly ihany. Raha te hampihetsika ny iMessage sy ny Facetime dia mila mandefa hafatra iraisam-pirenena ianao (toa any London izany). Vantany vao mavesatra ny trosanao dia esory ny sary (raha efa nihetsika ianao) dia avereno indray ilay iPhone. Rehefa efa mandeha izy dia averinao fotsiny ilay izy ary ho hita hoe "Miandry fampahavitrihana ..." fa amin'ity indray mitoraka ity ao anatin'ny 1 na 2 minitra dia ho vonona izy satria ity indray mandeha ity no nandefasana ny hafatra. Manantena aho fa afaka manampy anao io. Akoraina ny Facetime afaka 1 minitra, ho an'ny iMessage raha maharitra ela kokoa izy io. Manantena aho fa ny olona manana izany olana izany hahita vahaolana amin'ity valiny ity. Famihinana avy any Lima - Peroa "
Ity ny rohy hahafahanao manamarina azy
Nataoko izay nolazain'ny JAVIERDRUMS ary niasa ho ahy izy io, nanao ny famerenam-bola mialoha aho ary 0.50 cents monja no nivoaka avy eto Lima.
Andramo, tampoka ho an'ny maro dia izao no vahaolana.
Mamaly an'i giovisdesign
alempsar dia hoy izy:
Salama hariva, marary am-pandriana aho, tsy maintsy mila mamerina amina carte prepaid aho hamahana ny olan'ny iMessage.
Mamaly an'i alempsar
Io no fizotran'ny famoronana ny dian-tànana hanalavirana ny fiarovana ny Touch ID
Amboary ny olan'ny Wifi ao amin'ny iOS 7